Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း)
Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အာရုံစူးစိုက်မှုချို့တဲ့တက်ကြွလွန်းခြင်းရောဂါ ကိုကုသရာမှာသုံးပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်းသဘာဝအတိုင်းရနိုင်တဲ့ ပမာဏကိုပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဗဟိုအာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဆေးအမျိုးအစားမှာပါပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်း ဓါတုပစ္စည်းတွေကိုသက်ရောက်မှုရှိပြီး အရမ်းတက်ကြွစေတဲ့ အာရုံကြောတွေကို လည်း သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုလည်း ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။
ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်နဲ့သာသုံးပါတယ်။ ကယ်လိုရီလျှော့ထားတဲ့အာဟာရတွေနဲ့တွဲသုံးခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်အရမ်းများတဲ့လူတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့သွားစေပါတယ်။ အခြားကုသမှုတွေခံယူထားတဲ့( ဥပမာ အစာအကန့်အသတ်ထားစားခြင်း၊ အခြာ်းဆေးဝါးများ၊ အုပ်စုလိုက်အစီအစဉ်များ) လူနာတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်မကျဘူးဆိုရင် ဒီဆေးကိုသီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အစားစားလိုစိတ်ကို လျော့ပေးခြင်းဖြ်င့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ မသင့်မတင့်အသုံးပြုခြင်းက သေဆုံးခြင်းသို့ နှလုံးအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးကအထူးသဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် ကြာကြာသုံးမယ်ဆိုရင် ဆေးစွဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက် ပိုကြာကြာသုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ အာရုံစူးစိုက်မှုချို့တဲ့တက်ကြွလွန်ရောဂါအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင် အစာမပါဘဲ့သို့ အစာနဲ့တွဲပြီး သောက်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက်ဆိုရင် ပါးစပ်ကသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ အခြားဆေးတွေ၊ အာဟာရအကန့်အသတ်ထားစားခြင်းတွေကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းမအောင်မြင်မှသာလျှင် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ညနေနောက်ပိုင်းမှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အိပ်စက်မှုအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
methamphetamine သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ရေတိမ်ရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်အကျိတ်များဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် လွန်လွန်ကဲကဲတက်ကြွခြင်း၊ အပြင်းအထန်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်လွန်လွန်ကျွံကျွံမဟုတ်ရာကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိသွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ အရက်ဆေးစွဲဖူးခြင်းတွေရှိရင် မသုံးသင့်ပါဘူး။
Pimozide သို့ methylene blue injection အသုံးပြုကုသမှုခံယူနေရရင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline, or tranylcypromineကဲ့သို့သော MAO inhibitorတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့၁၄ရက်ကအသုံးပြုနေမယ်ဆိုရင် မသုံးသင့်ပါဘူး။
အောက်ပါအချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သို့ methylphenidateဆေးဓါတ်မတည့်တာရှိမယ်ဆိုရင် မသုံးသင့်ပါဘူး။
အချို့သောလှုံ့ဆော်ဆေးတွေဟာ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုကိုတချို့လူတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
နှလုံးပြဿနာများ သို့ မွေးရာပါနှလုံးချို့ယွင်းခြင်း
နှလုံးရောဂါရာဇဝင်ရှိဖူးခြင်း သို့ ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်ချေရှိဖူးခြင်း
အဆီများခြင်းအဝလွန်ခြင်းအတွက်ဆိုရင် အခြားဆေးတွေ၊ အာဟာရအကန့်အသတ်ထားစားခြင်းတွေကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းမအောင်မြင်မှသာလျှင် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမေရိကန် အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ချေအုပ်စု Cမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်မှုများ ( အဖုအပိမ့်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပါးစပ်မျက်နှာနှုတ်ခမ်းလျှာရောင်ခြင်း၊ လည်ပင်းရောင်ခြင်းတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်အကူအညီချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပုံမှန်နှုန်းအတိုင်းမကြီးထွားလာဘူးဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ဆေးကိုရပ်လိုက်ပြီး ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ လစ်ဟာဟာဖြစ်ခြင်း
ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း ( တကယ်မရှိသည့်အရာတွေကို မြင်နေရခြင်း၊ ကြားနေရခြင်း၀ ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ရန်လိုခြင်း၊ တစ်ပါးသူအပေါ်ယုံမှားသံသယလွန်ကဲမှု
ထုံခြင်း၊ နာခြင်း၊ အေးခြင်း၊ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ အနာများ၊ အရေပြားအရောင်ပြောင်းခြင်း( ဖျော့ခြင်း၊ နီရောင်သို့အပြာရောင်) လက်ချောင်းခြေချောင်းများတွင်
အကြောင်းရင်းမရှိဘဲကြွက်သားများနာခြင်း။ အားနည်းခြ်င်း( အထူးသဖြင့် အဖျား၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲမောပန်းခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း)
ဘယ်ဆေးတွေက Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
5 mgဆေးပြားတစ်ပြားကို အစားမစားမီတစ်နာရီခွဲကြိုသောက်သင့်ပါတယ်။ ကာလအားဖြင့်သီတင်းပတ်အနည်းငယ်ထက်မပိုသင့်ပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းပမာဏ-5mgသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သို့နှစ်ကြိမ်
အပတ်စဉ်5 mg သင့်တော်တဲ့တုန့်ပြန်မှုမရမချင်း တိုးပေးသွားသင့်ပါတယ်။
အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးတဲ့ဆေးကတော့ 20 to 25 mgနေ့စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
စုစုပေါင်းတစ်နေ့စာပမာဏကို နှစ်ကြိမ်ခွဲပြီးနေ့စဉ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဆက်ပေးဖို့လိုလောက်အောင်
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများပြန်ပေးလာမယ်ဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် တစ်ခါတရံဆေးရပ်ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ယ။
5 mgသောက်ဆေး အစားမစားခင်မိနစ်၃၀ကြိုပြီးသောက်သင့်ပါတယ်။
Methamphetamine (မီသမ်ဖက်တမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Methamphetamine ဆေး့ပြား ထုတ်ပေးမှုချဲ့ထားသောပုံစံ သောက်ဆေး :5mg; 10 mg; 15 mg
Methamphetamine. https://www.drugs.com/methamphetamine.html. Accessed July 26, 2017
Methamphetamine HCL. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-8676/methamphetamine-oral/details#uses. Accessed July 26, 2017
Methamphetamine သုံးနေလား၊ ဒီအကျိုးဆက်တွေ သတိထား…